Muxuu yahay sawirka dhaqaajiyay quluubta malaayiinta qof? - Tilmaan Media
Sawir muujinaya ilma yar oo da’diisa lagu qiyaasay saddex jir oo ku dul fadhiya meydka awoowgii ayaa qabsaday baraha bulshada ee dalka Hindiya iyo guud ahaan meela badan oo caalamka.
Ilmahan yar oo lagu magacaabo Aayad ayaa la sawiray isagoo ku dul ooynaya meydka awooga oo qoyskiisa ay sheegeen in ay dileen ciidamada Hindiya ee Kashmiir.
Sawirkan oo caro badan dhaliyay ayaa la qaaday xilli dagaal u dhaxeeya ciidamada Hindiya iyo koox kasoo horjeeda uu ka socday magaalada Sopore ee Kashmiir qeybta Hindiya ay maamusho, waxaana sawirka laga dheehan karay canugga yar oo wajigiisa argagax ay ka muuqato, awoowgii oo meyd ahna ku dul oynaya.
Haseyeeshee booliska dalka Hindiya ayaa iyaguna soo bandhigay sawir kale oo ay shegeen in ilmahaas yar ay kasoo badbaadiyeen goob ay ku dirirayeen booliska iyo koox ay dowladda dalkaas ku tilmaamtay “argagixiso”.
Qaar kamid ah sawirada ay soo bandhigeen booliska ayaa muujinaya Aayad oo la socda sarkaal boolis ah, sawirkaas oo ay ku tilmaameen in uu caddeyn u yahay sida booliska ay usoo badbaadiyeen.
Dad badan waxay sheegashada booliska ku tilmaameen borobagaando ay ku doonayaan inay ku jahwareeriyaan xaaladda dhabta ah.
Suhail Axmed oo uu dhalay odayga la dilay ayaa warbaahinta maxalliga ee dalka Hindiya u sheegay in aabihii oo lagu magacaabo Bashiir Axmed Khan “laga soo saaray baabuurkiisa, kadibna lagu hor toogtay ilmaha yar oo baabuurka la saarnaa”.
R/wasaaraha Norway oo Soomaaliya ugu hambalyeeyay 60-guurada xorriyadda Soomaaliya